တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း CHOI_WAN (FIFTEEN) အခြေအနေ | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း CHOI_WAN (FIFTEEN) အခြေအနေ
ပိစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အနောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း FIFTEEN ဟာ တဖြည်းဖြည်း အားကောင်းလာနေပြီး အခုထက်ပိုမိုအားကောင်းလာနိုင်ကာ အဆင့် ၄ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြီးအဆင့်ကိုတောင်ရောက်လာနိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းထားတာတွေ့ရပါတယ်။
အခုအချိန်မှာ ကုန်းတွင်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိသေးပေမဲ့ နောက်လာမဲ့ ရက်သတ္တပတ်အကုန် (စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့) အထိ အခုခန့်မှန်းထားတဲ့ အတိုင်း ဆက်လက်တည်ရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ ဂျပန်နိုင်ငံကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်နိုင်တဲ့ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြီး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဆက်လက်စောင့်ကြည့်နေပြီး ထူးခြားတာရှိလာရင် ဆက်လက် တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
click on picture to view full image size
Posted in Weather News. Tags: CHOI-WAN, tropical-storm, typhoon, weather.2Comments »
2 Responses to “တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း CHOI_WAN (FIFTEEN) အခြေအနေ”
Yes, please say something Min Min 😀
« တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာ အပူပိုင်းမုန်တိုင်း KOPPU ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိ
ဟောင်ကောင်တွင် မုန်တိုင်းသတိပေးချက်ထုတ်ပြန် (KOPPU-update) »